Xogo aan idiinka hayno rag isku sheegay in ay yihiin la taliyayaasha gaarka ah ee Madaxweyne Muuse Bixi | Awdalpress.com
Xogo aan idiinka hayno rag isku sheegay in ay yihiin la taliyayaasha gaarka ah ee Madaxweyne Muuse Bixi
Waxa Daabacay staff-reporter on Dec 1st, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Awdalpress – London – Saxaafadda Awdalpress.com oo muddaba u kuur galaysey Madaxweynaha Cusub ee la doortay balse aan xilkii la wareegin iyo wararka ku gadaaman, ayaa heshay xogo ku saabasan cidda la talisa Madaxweyne Muse Bixi Cabdi oo 14 Dec. 2017 la wareegi doona xilka Madaxweyne ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxan la soconnaa markii ay doorashadu dhammaatay in uu Madaxweynaha la doortay waa Muse Bixiye ka hadlay fagaarayaal. Isla markaana uu laba arrimood ka dhawaajiyey:
1. Waa ta koowaade, waxa uu si cad u sheegay in mar haddii la doortay talada aan laga qasin, oo aanay weliba taageerayaashiisii wareerin.
2. Ta labaadna waxa uu sheegay in uu soo dhisi doono dawlad tayo leh, balse aad u tiro yar.
Marka aan labadaa arrimood ka dhaqaaqno, waxa la is weydiin karaa AYAA KULA TALIYEY IN UU LABADAN QODOB DURBA KA DHAWAAJIYO?
Dad badan oo aan weydiinnay su’aashaasi, ayaa aakhrikii nala xushay meelo badan iyo dad badan oo sheegtay in ay xogta Muse hayaan, taladaasina ay tahay kuwo hore loola taliyey. Arrimo badan oo kalena ay soo socdaan.
La taliyayaashaasi aan xogaha muhimka ah ka hellay amma noo caddeeyey in uu Muse si fiican u dhageystaa, waxa ay ka hawl galaan Somaliland iyo qurbaha, xafiiyadooduna waa social media ha iyo siyaal kale oo aan sheegi doonno.
An ku horreeyo nin magaciisa ku soo gaabiyey XL oo sheegtay oday-dhaqameed:
Ninkani waxa uu leeyahay waxan ahay oday dhaqameed ay Muse isku reer yihiin, halgankii lagu doortayna juhdi badan ayaan ku bixiyey. Reeraha doortay iyo dadka mudanka ahna ee beelaha kale ka soo jeedana ninka xidhiidhiya ayaan ahay. Anigu markaa waxan kula taliyey in sameeyo dawlad ka yaraysa buuqa iyo mucaaridka reeraha, oo uu bilowga hore beesha Cirro u dhiibo ilaha dhaqaalaha ee dawladda. Reerka aan nahay iyo kuwii na taageerayna aanu marna illaabin, ee uu qayb weyn ka siiyo dawladdiisa.
Nin kalena waxa uu ii sheegtay aqoon yahan talo badan ku leh Muse Bixi.
Muddo 15 sano ah ayaan Muse is naqaannay haybta guudna waan isa soo gallaa, kulammo badan oo aan yeelannayna waan ku haasawnay, rag badan oo agtiisa ku dhaw dhawna waan wada xidhiidhnaa. Ololihii doorashadana qaybta kicinta da’yarta iyo mujtamacaba aad ayaan uga hawl galay, oo waxa facebook gayga ku xidhan dad aad u badan. Immigana Muse waxan si dadban talooyinka ugu mariyaa social media ha. Si dadka igu xidhani ay farriimahayga iyo talooyinkayga u gaadhsiiyaan Madaxweyne Muse Bixi. Arrimaha aan kala taliyana waxa ka mid ah; Sidii uu dawladda cusub u dhisi lahaa, ee uu reeraha ugu qaybin lahaa iwm.
Suxufi isna yidhi waxan ka mid ahay la taliyayaasha iyo u adeegayaasha Muse Bixi ayaan idiin soo gudbin.
Saxafi ayaan ahay, reernimada ayaana igala weyn qaranimada Somaliland, maanta fursad ay dadkaygu ka faa’iidaytaan ayey haystaan, sidaasi daraaddeed intii karaankay ah waxba iskula hadhi maayo, oo ugu horreyn Muse Bixi waan difaacayaa, intii ololaha uu ku jirayna dad badan ayaan isku seegnay, dantaydiina waan ku seegay. Immigana maalin walba gurigiisa iyo goobaha reerkayagu arrimaha siyaasadda ku falanqeeyaan ayaan ka ag dhawahay.
Aniga waxan ahay Ahmedweli Goth, taladayda waxan mariyaa saxaafadda, mar kastana waxan doonayaa in aan talo san siiyo Madaxweyne Muse Bixi
Waxan ahay saxafi iyo qoraa qalbigiisu aanu dhinacna uga leexan rabitaanka shacabkiisa, dhismihii dalka iyo dhismihii haykallada dawladdana talo badan ku lahaa, laakiin marna kamaan mid noqon xukuumadihii dalka soo maray. Laakiin tixgelin ayaan ku qabay, oo talo iyo tusaalaynba waan ku lahaa, waxa ay iiga baahdaan.
Maanta aad ayaan ugu faraxsanahay in uu Muse Bixi madaxweyne noqdo, waayo waxan ogahay in uu aad uga duwanaan doono madaxweynayaashii hore, dabcan wakhtiguna waa saacidayaa oo xilliga uu ku soo hagaagay ayaa ah mid ay Somaliland u bislaatay reform.
Wararka immiga suuqa la marinayo waan maqlaa, laakiin ka hor dhici maayo, waxanse aamminsahay in uu Muse Bixi yeelan doono la taliyaal khibrad u leh haykallada dawladda iyo shacabka oo ay shaqadoodu noqon doonto la taliyayaasha habboon ee dawladda.
Muse Bixi waa Muse Bixi maaha qabiil, beella maaha. Waxa doortay 54% dadka dega Somaliland, waxana ay u doorteen in uu hoggaamiyo dalka iyo dadka reer Somaliland, ee leh aqoon yahan, culamaa’u diin, ganacsto, shaqaale ama dadka shaqada la’, arday, hooyooyin, aabbayaal, danyar, curyaan, qof xanuunsan, degaanka, xayawaanka iyo guud ahaanba adeegyada bulshada IWM.
Waxa hor yaalla dhibaatooyin ragaadiyey maamulka, dawladnimada, habsami u socodka adeegyada bulshada, toosinta caddaaladda, ilaalinta hantida qaranka, kor u qaadista tayada caafimaadka iyo Waxbarashada, wax ka qabashada biyo la’aanta, kor u qaadista wax soo saarta, kobcinta ilaha dhaqaalaha, dhaqan toosinta, wax ka qabashada sicir bararka iyo dhaqaalaha dalka, ilaalinta cashuurta dalka, shaqo la’aanta, xakamaynta qabyaaladda, ammaanka iyo la dagaallanka musuq maasuqa.
Waa innoo mar kale
This post has been viewed 7565 times.